Kuthetha ukuthini ukuphupha umntu othandana naye? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Ukuphupha umntu othandana naye
2 Ngaba ukuphupha umntu othandana naye kungumqondiso wokuba ubudlelwane busemngciphekweni?
3 Thetha nesithandwa sakho
4 Ukuphulula, ukuphuza okanye ukuphuma
5 Ndikunye nesithandwa esilwa nawe
6 Umyeni ngumntu wasemzini
7 Umyeni nomyeni bayalwa
8 Iqabane elibuhlungu ngokungabi nawe
9 Ngaba ukuphupha ngesoka luphawu oluhle?
Ukuphupha umntu othandana naye
Ukuthandana yinxalenye yohambo lwabo bonke abantu abancinci, abantu abadala kwaye ke ngoko yinxalenye yesiqhelo somntu wonke. Ukuphupha umntu othandana naye luphawu lokuba kuya kufuneka unike ingqalelo engakumbi ekuthandaneni. Musa ukuphelelwa lithemba kwaye ungacingi ukuba izakuphela, kodwa kuyonwabisa ukubukela.
Ngobuncinci obunokubakho abantu, kuyinto eqhelekileyo ukuba noloyiko kwaye ukungakhuli yinxalenye yako. Ukuba ubukhethwe ukuba uphuphe isoka, kukuxelwa kwangaphambili malunga nokuthandana ngokubanzi. Kuya kuxhomekeka kuwe kuphela ukuba uyenze isebenze kwaye iya kuhlala iluncedo kuwo omabini amaqela.
Ngaba ukuphupha umntu othandana naye kungumqondiso wokuba ubudlelwane busemngciphekweni?
Olu hlobo lwamaphupha sisicelo esivela ngaphakathi ukuyeka ukujonga ubudlelwane ngendlela engafanelekanga. Inomtsalane njengokudlala, kubalulekile ukugcina intloko yakho endaweni kwaye ungaweli kwimidlalo emincinci. Ngaphandle koko, uzibeka emngciphekweni wokuthandana ujika ube lukhuphiswano apho ukhuphisana khona kwaye uwedwa.
Ukuphupha umntu othandana naye luphawu olulungileyo kwaye ngaphezu kwako konke uThixo akholelwa kubudlelwane bakho bubonke. Esi silumkiso sanikwa kuwe njengephupha kwaye ukuba uyayazi indlela yokusebenzisa eli thuba kungangcono. Namhlanje uyazi ezona ntsingiselo zixhaphakileyo kubantu abaphuphe ngesi sihloko.
Thetha nesithandwa sakho
Ingxoxo yeyona nto ibalulekileyo kulo naluphi na ulwalamano, kuba kulapho iingxaki zisonjululwa khona. Ukuba uphuphe eli phupha kubalulekile ukubulela uThixo ngayo yonke into akwenzele yona ngeli xesha. Eli phupha belikulumkisa ukuba kufuneka uthethe ngakumbi kwaye oku akunakulinda.
Ingcebiso ebalulekileyo kuwe kukufuna incoko ngamaxesha amnandi nangamaxesha amabi, kuba oko kuyakwenza umahluko. Ukuba abathembekanga kwaye abanyanisekanga omnye komnye, banokuba neengxaki. Incoko elungileyo yindlela yokuba amaqela aqondane kwaye ahlangane ngakumbi nangakumbi.
Ukuphulula, ukuphuza okanye ukuphuma
Olu hlobo lwamaphupha yile inentsingiselo eya kufuna ingqalelo enkulu. Ukuphupha umntu othandana naye ephulula kuwe luphawu lokuba ucinga ngawe ngalo lonke ixesha, nangoku. Into yokuba uye wakwanga okanye wakuthandana nawe ngumqondiso wokuba kufuneka wenze iinzame zokuphoswa.
Kubudlelwane obungaphezulu kweenyanga ezi-6 kuqhelekile ukuba kubekho umsantsa omncinci ngenxa yezizathu ezininzi. Indoda ayinakufane ibonise iimvakalelo kunowesifazane, ke kubalulekile ukuba elinye iqela liyenzele apho, kwimeko apho kuya kufuneka uyenze icace kuye ukuba umthanda kangakanani.
Ndikunye nesithandwa esilwa nawe
Ukunika ixabiso elincinci kuthando lweqabane lakho kuqhelekile kwaye ukuba uphuphe kungumqondiso wokuba kwenzeke kuwe. Kubalulekile ukuba uyixabise ngakumbi ukuze kungabikho ngxaki phakathi kwakho. Kule mihla bekunzima ukufumana uthando lokwenene ekufuneka usoloko unombulelo ngalo.
Kunzima njengolwalamano ngamanye amaxesha, kubalulekile ukuba uyixabise into osele unayo kwaye uyinyamekele. Ngexesha elifutshane izinto ziya kuzola kwaye uyakube usela i-toast kwisigaba esihle, kuba yonke into itshintshile yangcono.
Umyeni ngumntu wasemzini
Eli phupha lifuna ukuba ubonakalise kancinci kubudlelwane bakho. Umntu usenokungakulungeli, ngenxa yoko kubalulekile ukuba uzame ukuhlalutya yonke loo nto. Zama ukungoyiki ukutshintsha okanye nokuphelisa ubudlelwane, kodwa yonke into kufuneka yenziwe kuwo onke amanqaku.
Umyeni nomyeni bayalwa
Isibini samakhwenkwe ngamanye amaxesha sinokungavisisani kwaye yiyo loo nto kubalulekile ukuba uhlala unomdla omkhulu. Ukuphupha isithandwa sisilwa nentombi yakhe ngumqondiso wokuba kufuneka ubuxabise ubudlelwane ngakumbi. Zama ukuthatha uhambo olude kunye kwaye wonwabele ixesha lokuba nibe kunye.
Iqabane elibuhlungu ngokungabi nawe
Ukuba uphuphe ukuba umfana wakho akanaye, luphawu lokuba uya kuzama ngamandla ukukukholisa. Uloyiko lwakhe lokulahlekelwa nguwe lukhulu kangangokuba isimo sakhe sengqondo siya kuba kukukholisa ngamaxesha onke. Namhlanje abantu abasenakuphinda bazame ukuphucula ngokucinga kwelinye icala lolwalamano lwabo.
Ngaba ukuphupha ngesoka luphawu oluhle?
Ngokuqinisekileyo, kwaye isizathu kukuba nokuba imeko imbi kangakanani, kuhlala kukho ithuba lokuphucula imeko. Imfihlelo kukuthetha, ukuhlalutya izimo zengqondo kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuthobeka ukuze ungavumeli ukuthandana kube yingxabano.